सरकारलाई लल्कार्दै गगनले भनेः कांग्रेसको इतिहास मेटाउने हिम्मत र ताकत छ? - हिमाल दैनिक
क मनमोहनका लागि दुई तिहाई देख्न नपाएपनि क मार्सीमोहनका लागि दुई तिहाई देख्न पाएकोमा सरकारलाई बधाइ छ
२० माघ २०७५, आईतवार १८:४५
नेपाल सरकारलाई बधाई छ। एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग निहुँ खोज्यो। त्यो पनि दुई तिहाईको सरकारसँग, यस्तो बलियो सरकारसँग। सरकारले देखाइदियो। सरकारलाई बधाई छ।
सरकारको यस्तो अपार सफलतामा सरकार बनाउने माननीय सांसद खुशी नहुने कुरै भएन। तर, खुशी हुनेहरुको लाममा अरुपनि थुप्रै उभिएका रहेछन् सम्माननीय सभामुख महोदय।
प्रत्येक वर्ष करिब १५ सय जति नेपाली विद्यार्थीहरु नेपालभन्दा बाहिर डाक्टरी पढ्न जान्थे। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने, नेपालको प्रवेश परिक्षा पास नगरीकन खल्तीमा पैसा बोकेरमात्रै कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैनन्। १५ सय विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको करिबकरिब १२/१३ सयले नेपालको प्रवेश परिक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन्। वर्षको १२/१३ सय नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए। यीनलाई बाहिर पठाएर केहि सर्वहाराहरुले आफ्नो पट पालिरहेका थिए, स्वरोजगार भइरहेका थिए। डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसके पछाडि बाहिर पठाउने काम गर्नेहरु, जसको काम चौपट्ट भएको थियो, यी कमरेडहरु बडा खुशी भएका छन् सभामुख महोदय, सरकारलाई बधाई छ।
केहि मेडिकल कलेज बाहेकका मेडिकल कलेजहरुले राम्रो गरिरहेका थिए। यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै मिलाउँथे। विरामी पनि भाडामा ल्याउँथे। डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे। एकसय जना पढाउन पाउने अनुमति प्राप्त गरेको मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको विरामीको आधारमा करिबकरिब दुइ सय सिट पाउँदै थिए। डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे। सिट संख्या घटाएर सय पुर्याइदिए। त्यतिमात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली विरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए र सय सिट संख्यामा घटाइसके पछाडि करिबकरिब एक करोडको हाराहारीमा पुग्न लागेको मडिकल एजुकेशनको फिलाई ५० लाख मुनी ल्याइदिए। यी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विचाराहरु डाक्टरसँग औधी रिसाएका थिए। यी आज बडो खुशी भएका छन्, सरकारलाई बधाई छ।
मेडिकल एजुकेशनको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितताहरु भयो भनेर डाक्टर केसीको आन्दोलनबाट उनले सरकारसँग एउटा माग राखे। त्यो माग अनुरुप सरकारले गौरीबहादुर कार्की पूर्वन्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो। डाक्टर केसीले भने, समितिले पुग्दैन। न्यायिक आयोग नै बन्नु पर्छ। त्यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ। थुप्रैलाई डामेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरु समेतलाई यसले यीनले गरेका गलत कामहरुको बारेमा लेखेको र बोलेको छ।
सरकारले अहिलेसम्म केहि पनि गर्न सकेको छैन। तर, त्यी सबै रिसाएका थिए। डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरु खुशी भएका छन्। को खुशी भएका छैनन् सम्माननीय सभामुख महोदय?
लोकमानसिंह कार्कीदेखि लिएर कालिकास्थानको टहरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुशी भएका छन्। फेरिपनि यत्रो मान्छेलाई खुशी बनाउने सरकारलाई बधाई छ। बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ।
हामीले दुई तिहाई, दुई तिहाईको दम्भ भनेर भन्यौँ। तर, यो दुई तिहाईको दम्भ कहिल्यै देख्नै पाएका थिएनौँ। यो सम्मानित संसदमा कुनै बेला अनाथ अपाङ्ग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाको कानुन बनाउने एउटा अवसर प्राप्त भयो। दुई तिहाई देख्न पाइएन। भूमिहिन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जिविकोपार्जन गर्न जमिन दिउँ र दशवर्षपछि उनले त्यो जमिन आफैँ बेचविखन गर्न पाउने गरीकन हकअधिकार हस्तान्तरण गरौँ भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो। तर, त्यो बेलामा दुई तिहाई देख्न पाइएन। शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दै गर्दा दुई तिहाई देख्न पाइएन। स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाउँ भन्दैगर्दा दुई तिहाई देख्न पाइएन। यस्ता अनेक ठाउँमा दुई तिहाई देख्न पाइएन।
यो भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउँ भन्ने प्रस्ताव सरकारले पारित गरेको कुरा संसदमा आएर कानुन बनाउन मात्र बाँकी छ। कमरेड मनमोहनका लागि दुई तिहाई देख्न पाइएन। कमरेड मनमोहनका लागि दुई तिहाई देख्न नपाएता पनि कमरेड मार्सीमोहनका लागि दुई तिहाई देख्न पाइयो। सरकारलाई बधाई छ। सरकार बनाउने पार्टीलाई पनि बधाई छ।
दुई तिहाइले डाक्टरलाई त उठाइदियो। सुतेको डाक्टर उठे। तर, प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्र होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास सुत्यो अब। ढल्यो। यो ढलेको विश्वासलाई कसले उठाइदिने? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डढेलो लाग्यो पानी कसले हालिदिने हो?
हुनत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ। नेपालीहरुले नबुझ्ने भएर भन्नु भएको होला। तर, देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्यचकित होइन, यस्तो वितण्डतावादी तर्क र वाकछलवादी प्रवृति देखेर जनता दिक्क भएका छन्, आक्रोसित भएका छन्।
शान्ति सुरक्षाको यत्रो संकल्प गरेर आएको सरकार, निर्मला पन्तको प्रकरणको बारेमा यस्तो असंवेदनशीलता देखाएको सरकारले भर्खर मात्रै कलवायु मोरङमा अर्को यस्तै एउटा, यो भन्दा ठूलो अझ विभत्स घटना भएको छ। रुपमती दासको सामूहिक बलत्कार भएको छ। निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या प्रकरणमा यस्तो असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीपन देखाउने सरकारले त्यो भन्दा फरक व्यवहार देखाउछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न।
अर्थतन्त्र यस्तो संकट उन्मुख भएको छ। कुनै पनि बेलामा गल्र्याम गुर्लुम ढल्ला भन्ने जस्तो छ। सरकार कुनै सार्थक पहल गर्दैन। विश्वास जगाउनका निम्ति कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, ढाकछोप गर्छ। यो देख्दै गर्दा जनता आक्रोसित भएका छन्, आश्चर्यचकित होइन।
सरकार नेपालमा लगानीका लागि ठूलो महोत्सव गर्दैछ। तर, यो भन्दा पहिला लगानी गर्न आउँछु भनेका मानिसहरु सब टाप ठोक्दैछन्। किन? उनीहरु हेरिरहेका छन्। पहिलो पटक देशका व्यापारी, उद्योगीहरु सडकमा निस्किरहेका छन्। व्याजदर घटाइदेउ, काम गर्न सकिएन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन भनेर। भएका उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोहि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न चाहिरहेका छैनन्। सबै उद्योगधन्दा कलकारखाना चलाउने मानिसहरु यस्तो निराश भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छः संसार धोक्रोका धोेक्रो पैसा बोकेर नेपाल आउँदैछ। यो भनेको र यहाँभित्र भएको फरक देखेर जनता आश्चर्यचकित छैनन्, आक्रोसित छन्।
र पहिलो पटक नेपालमा प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने काम मात्र होइन, तथ्यांक तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन निस्कन्छ, डुइङ्गविजनेश रिपोर्ट निश्कन्छ। सरकारले नेपालभित्र व्यवसायको वातावरण सुधार कसरी गर्ने भन्दैन। धम्क्याउँछ। तेरो रिपोर्ट च्यातिदिन्छु भन्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले तेरो देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छ। सरकार भन्छः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल आफैँ कुनै भरपर्ने संस्था होइन। राष्ट्र बैंकदेखि लिएर योजना आयोगदेखि लिएर वित्तिय आयोगसम्म सबलाई निकम्मा बनाएर सानो एउटा कोटरीबाट सिंगो सरकार चलाउने कोशिश भइरहेको छ। हामी देखिरहेका छौँ।
प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ, म भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिन। दायँ भ्रष्टाचारी, वायाँ भ्रष्टाचारी, विमान किन्दा भ्रष्टाचार, जलविद्युतमा भ्रष्टाचार, वैदेशीक रोजगारीमा भ्रष्टाचार, दुरसंचारमा भ्रष्टाचार, यत्रतत्र भ्रष्टाचारी राखेर हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्दै गर्दा मलाई डर लाग्न थालेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले ऐना हेर्ने अवस्था बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ।
एउटा विवादस्पद अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि सरकारले नेपालको वेइजती गर्यो। सरकार आफैँ आयोजक भएर केहि महिना अगाडि हामीले देख्यौँ। सरकार लाग्यो, पार्टी लाग्यो, यो सदनको नाम सम्माननीय सभामुख महोदय, बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो सदनको भिडियो फुटेज देखाइएको छ। र भनिएको छः नेपालको सदनले फादर मुन नेपाल आएको दिनमा नेपाललाई नेश्नलन पिस डे घोषणा गरियो भनेर। यो सदनको २००५ भनेर भिडियो देखाइएको छ। र सरकारले यत्रो भव्य स्वागत गर्यो र सरकारले इन्डोर्स गर्यो भनेर भनिएको छ। यत्रो राष्ट्रिय वेइजती गरेर आएको सरकारले भर्खर मात्रै काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो यो बेलामा संसारभरी बडो संवेदनशील र परिपक्व ढंगबाट आफ्नोे सम्बन्धहरुलाई विस्तारित गर्नु पर्ने, कतिपय सम्बन्धहरुमा नयाँ आयामहरु थप्नु पर्ने ठाउँमा तुक न ताक भेनेजुयलाका बारेमा बोलेर नयाँ संकट नेपालमा निम्त्याएको छ। यो देखेर जनता आश्चर्यचकित होइन, जनता दिक्क भएका छन्।
आमनेपाली जनता चाहन्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एकपटक ऐना अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेनुहोस्। अनुहारमा दागैदाग लागेको छ। त्यो दागलाई मेटाउनुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्री सफा देखिनुहोस्, उज्यालो देखिनुहोस्। हाम्रो पनि चाहना यहि छ र जनताको चाहना पनि यहि छ। तर, प्रधानमन्त्रीको आत्मसहगा हेर्नुहोस् त, ऐनाको अगाडि उभिएर दाग देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ, ऐनामा भएको फोहोरलाई मेटा। किन कि मेरो अनुहारमा दाग हुनै सक्दैन। सत्य मै हुँ। ब्रम्हा मै हुँ। मेरो अनुहारमा दाग हुन सक्छ? पक्कै यो ऐनामा फोहोर होला, ऐनाको फोहोर मेट भनेर भन्नु हुन्छ। यो देखेर नेपाली जनता साँच्चिकै आक्रोसित भएका छन्।
त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको यो आक्रोशलाई सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। जनताको यो आक्रोशलाई बाँडीदिने काम हाम्रो हो। यहि जिम्मेवारी बोकेर हामी यो सदनमा आएका छौँ। र हामी हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौँ। सरकारको अक्षमता र अहंकार र यसले निम्त्याएका एकपछि अर्को काण्ड र घटनाले गर्दा हामीलाई डर लाग्न थालेको छ, चिन्ता लाग्न थालेको छ। आक्रोस प्रधानमन्त्री, सरकार हुँदै भर्खरमात्र हामीले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति त्यो आक्रोस नतेर्सियोस्। सरकारले श्रृजना गरेको निराशाको आगोमा कोही अरुले रोटी सेक्न नआओस्। कोही जातका नाममा, धर्मका नाममा झण्डा बोकेर कोही नआओेस्। हाम्रो चिन्ता यसमा छ। हामी यो व्यवस्था जोगाउन चाहन्छौँ। यो दिगो होस् भन्ने चाहन्छौँ। यो संविधानको सार्थक कार्यान्वयन चाहन्छौँ।
त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोेदय, हामीले यो सदनमा पटक पटक अवरोध गर्यौँ। हामी दुइटा अस्पतालको विषयलाई लिएर उठ्यौँ। यसरी उठ्दै गर्दा कतिपय साथीहरुले बडो हलुकासँग एउटा जाबो अस्पतालको विषय भनेर भन्नु भयो। हामीलाई पनि राम्रोसँग थाह छ सभामुख महोदय, हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम कसैले अस्पताल अगाडिबाट मेट्न सक्ला तर, शान्ति प्रक्रियामा उहाँले गरेको हस्ताक्षर मेट्ने आँट छ कसैको? हाम्रो नेता सुशील कोइरालाको नाम कसैले अस्पताल अगाडिबाट मेट्न सक्ला जुन संविधानको आधारमा हामीहरु आज यहाँ छौँ, त्यो संविधान अगाडिबाट मेट्न सक्ने हिम्मत छ कसैको? त्यसैले यहाँ प्रश्न दुईटा नेताको नामको अस्पताल होइन, अस्पताल जोगाउनु त आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँ प्रश्न सरकारको नियतको होे। यहाँ प्रश्न सरकारको प्राथमिकताको हो। सरकारको सोचको हो।
सरकार यति हैसियतमा भएको प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त निशेध गरेर जान चाहन्छ, सरकार हाम्रो अस्थित्वलाई अस्वीकार गरेर जान चाहन्छ भने सरकारले लोकतान्त्रिक राख्दैन मात्र होइन, सरकारका प्राथमिकता सबै निशेधमा हुन्छन्। गर्नु पर्ने काम गर्दैन, नगर्नु पर्ने काम गर्छ। जहाँ नबोल्नु पर्ने हो त्यहाँ बोल्छ जहाँ बोल्नु पर्ने हो त्यहाँ बोल्दैन। जे गर्नु पर्ने त्यो गर्दैन, जे नगर्नु पर्ने त्यो गर्छ भने प्रतिपक्ष स्वभाविक रुपमा चिन्तित हुन्छ र उसले त्यो विषय उठाउँछ।
हामीले सरकारलाई यहि ठाउँबाट लडेर बाध्य बनाएका छौँ र आफ्नो गल्ती सच्याउन बाध्य बनाएका छौँ। फेरि पनि बनाउँछौँ।
संवैधानिक आयोगमा जस्तो व्यवहार प्रतिपक्षी दलको नेतासँग जुन छलछाम गरिएको छ त्यसलाई पनि सच्याउन बाध्य बनाएर छाड्छौँ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। तर, पारित भएको विधेयकमा जुन प्वाल राखिएको छ र जुन प्वालबाट छिरेर, जुन बदनियतका साथ जे गर्छु भनेर सोचिएको छ त्यो गर्न दिइन्न। नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र चिकित्सा शिक्षा भएको सुधारमा अवरोध गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ। त्यो हिम्मत पनि हामीसँग छ, त्यो नैतिक ताकत पनि हामीसँग छ।
त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय,
म अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी थाहा छ। हाम्रो जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्छौँ। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा सदनमा हिँजो हामी उठ्यौँ, विरोध गर्यौँ, हाम्रा कुराहरु राख्यौँ। भोलि आवश्यकता परेको बेलामा फेरि गर्छौँ, फेरि राख्छौँ। तर, हामी जिम्मेवार र जवाफदेही प्रतिपक्ष भएर काम गर्दै गर्दा अनन्तकालसम्म संसद अवरोध गर्न हुन्न भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ।
सरकारलाई चिन्ता छैन, सदन चाँडो खुलोस् भन्ने कुरामा। सरकार अस्पतालको, सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयकको जुन गर्नै नपर्ने काम गरेर यत्रो दिन सदन रोक्ने अवस्था श्रृजना गर्छ। कानुन बनेन चिन्ता लाग्नु पर्दैन? यत्रो दिन सदन रोकियो चिन्ता लाग्नु पर्दैन? अहिले त्यो चिन्ता हामीले नबोक्ने हो भने देखाइदिन्छु सरकारलाई भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट लागिराख्ने हो भने यहि नाममा यहाँको संसद मात्र होइन, प्रदेशको संसद अवरुद्ध हुन थालेको छ। जताततै संसद अवरोध गर्न पर्ने अवस्था बनाउन सकिन्थ्यो होला तर, हामी त्यो चाहदैनौँ। हामी जिम्मेवार छौँ। किन कि हामी जवाफदेही राजनीति गर्छौँ। त्यसैले सदन चल्छ। सदन खुल्छ। कि कानुनहरु समयमा बनोस्, सरकारले गर्नु पर्ने कामको आधारहरु तयार होस्, हामी त्यो चाहन्छौँ।
तर, सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यति कुरा चाँही भन्छुः सदन चल्छ तर, हाम्रो सम्बन्ध अब हिँजोको जस्तो सम्बन्ध रहँदैन। हामीसँग यो सदनमा जे जस्तो व्यवहार गरिएको छ त्यो व्यवहार एउटा दुइटा घटनाबाट, एउटा दुइटा दिनबाट हामी विर्सन सक्दैनौँ। हामी सम्झिरहने छौँ। हामी मनमा पनि लिइरहनेछौँ र त्यो अनुरुपको व्यवहार पनि गरिराख्नेछौँ। र सरकारले हामीसँग जे व्यवहार गरेको छ त्यो व्यवहार सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने छौँ। जहाँ मद्दत गर्नु पर्यो त्यहाँ मद्दत पनि गर्नेछौँ। जहाँ विरोधे र प्रतिरोध गर्नु पर्ने हो त्यहाँ प्रतिरोध पनि गर्नेछौँ।
सरकार संसारलाई आश्चर्यचकित बनाउने काममा लागिरहोस्। प्रतिपक्ष देखिएन भनेको होइन सरकारले? प्रतिपक्ष सुनिएन भनेको होइन सरकारले? भोलिदेखि सडकबाट पनि सदनबाट पनि सरकारलाई प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर देखाउँछौँ र सरकारलाई आश्चर्यचकित पार्ने पालो हाम्रो हो। सरकारलाई प्रतिपक्ष देखाएर प्रतिपक्ष कस्तो हुँदोरहेछ भनेर अब आश्चर्यचकित हुने पालो सरकार हो। सरकारलाई फेरि पनि बधाई छ।
(कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा दिएको अभिव्यक्तिको अंश)
Prevपछिल्लोप्रतिनिधि सभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रशारण)
अघिल्लोनेपालको रोमाञ्चक जितले रचियो अर्को नयाँ रेकर्डNext